Caalamk:-Ciidanka Dalka Cameroon Oo Iska Soo Duubay Muuqaalkii Ug Yaabka Badnaa Iyo Waxa Uu Ku Saab San Yahay.
Caalamk:-Ciidanka Dalka Cameroon Oo Iska Soo Duubay Muuqaalkii Ug Yaabka Badnaa Iyo Waxa Uu Ku Saab San Yahay.
Nimanka ka soo muuqday muuqaalka ayaa la maqlayay iyagoo dumarka iyo caruurta ugu yeerayo BH ama boko xaaraam. Waxa ay ku hadlayeen luuqadda fransiska iyo lahajadaha kale ee Cameroon looga hadlo.
Waxa ay waddo raf ah ku wadeen laba dumar ah oo midi dhabarka canug yar ku sidato iyo gabar yar oo kale.
Kadibna indhaha ayay u xireen ka hor inta aysan dilin.
Waxaa la maqlalay Mid ka midah nimanka oo gabadha yar u sheegayo in ka xun yahay in uu arrintaan sameeyo balse dhibaatada ay keeneen waalidiinteeda.
Ilo wareedyo laga helayo deegankaasi ayaa BBC-da u sheegay in muuqaalkan laga soo duubay gobolka waqooyiga ee Tsanaga, waxa ayna u badantahay in ay tahay magaalada Mozogo halkas oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada Cameroon.
Ciidamadaan ayaa dagaal kula jira ururka Boko Xaraam ee waqooyiga Cameroon.
Afhayeen u hadlay milatariga ayaa BBC-da u sheegay in muuqaalkaasi uu ahaa mid aan jirin oo loogu talagalay in lagu dhaawaco sharafta milatariga Cameroon. Waxa uu sheegay in inkastoo uu dareeskooda uu u ekaa kan milatariga hadana kan vedio-ga ka soo muuqday waa uu ka midab furan yahay kan milatarigeena ayuu yiri.
Ciidamada Cameroon ayaa lagu eedeeyaa in ay geystaan dambiyo dagaal inta ay ku guda jiraan dagaalka Boko Xaaraam.
Sanadkii hore hay'adda caalamaiga ah xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty international ayaa ciidamada Cameroon ku eedeeysay in ay jirdilaan dadka ay kaga shakiyaan in ay ka tirsanyihiin Boko Xaaraam.